Kukadzi kuberekwa dombo - amethiste - ruvara rwepepuru - Nyowani yekuvandudza 2021
ametesti ndiro dombo rekuzvarwa raFebruary zvinoenderana neyese yekare neyemazita ezvinyorwa zvefeb dombo rekuzvarwa.
Zvinorevei kuti Kukadzi dombo rekuzvarwa kunorevei?
Dombo rekuzvarwa ibwe rinosanganiswa nemwedzi wekuzvarwa waKukadzi. ametesti. Inosimbisa hukama uye inopa iye anoibata ushingi. Pane imwe nguva, chete madzimambo aigona kupfeka dombo. VaGiriki vekare vaifunga kuti iyo ametesti kudzivirirwa pakudhakwa.
Dombo rekuzvarwa ra feb, ametesti , ndeye violet akasiyana equartz. ametesti ibwe risingakoshi iro rinowanzo shandiswa muzvishongo uye ndiyo yechinyakare yaKuberekwa dombo rekuzvarwa.
Chii chinonzi munaFebruary dombo rekuzvarwa?
Ko dombo rekuzvarwa raFebruary rinowanikwa kupi?
Chii chinonzi Kukadzi matombo ekuberekwa?
Ndekupi kwaungawana Kukadzi dombo rekuzvarwa?
Ndezvipi zviratidzo zveZodhiac zvemabwe ekuberekwa aFebruary?
ametesti inoitika mumatangi ekutanga kubva pane yakajeka pinkish violet ruvara kune yakadzika pepuru ruvara. Inogona kuratidza imwe kana ese maviri echipiri hues, tsvuku uye bhuruu. Iyo chaiyo giredhi ine yekutanga pepuru hue hwekutenderera 75-80%, iine 15-20% yebhuruu uye tsvuku yechipiri hues.
Izvo zvekutanga mari ye ametesti iri kuwanda muBrazil uko kunoitika mumatunhu makuru mukati mematombo anoputika. Artigas, Uruguay uye yakavakidzana nyika yeBrazil Rio Grande do Sul ndivo varimi vakuru venyika. Inowanikwa zvakare uye icherwa muSouth Korea. Iyo huru opencast ametesti Tsinga iri munyika iri muMaissau, Lower Austria. Zvakawanda zvakanaka ametesti inouya kubva kuRussia, kunyanya kubva padyo neMursinka mudunhu reEkaterinburg, kwainoitika mumatombo anodhakwa mumatombo egranitic. Nzvimbo zhinji kumaodzanyemba kweIndia dzinobereka ametesti. Imwe yehukuru hwepasirese ametesti Vagadziri veZambia iri kumaodzanyemba kweAfrica ine kugadzirwa kwegore rega kwematani anosvika chiuru. ametesti inoitika kune dzimwe nzvimbo zhinji pasi rese kusanganisira Cambodia.
Isu tinotengesa amethisto mhete, zvishongo, mhete, mitsipa nezvimwe.
ametesti zvishongo zvematombo zvinopenya zvinoyevedza & zvinoyevedza hue yepepuru uye zvakare riri dombo rekuzvarwa raFebruary.
Pane zvakanaka amethisto inotengeswa muchitoro chedu
Kukadzi ametesti inonzi inounza kujekesa kune manzwiro, manzwiro & kukosha kune iye anozvipfeka. ametesti inoshanda kuunza runyararo mupfungwa dzako uye nekorona chakra yako kuti ugone kutarisa pakurapa chero mabhureki ari kukutadzisa kubva pakuona mufaro. Yako yechina chakra yepepuru uye inozivikanwa sekorona chakra nekuti iri kumusoro kwepamusoro pemusoro wako.
Aquarius nePisces mabwe ese ari maviri mabwe ekuberekwa
Chero iwe uri Aquarius kana Pisces. ametesti ndiro dombo kubva muna Kukadzi 1 kusvika 29.
February 1 Aquarius ametesti
February 2 Aquarius ametesti
February 3 Aquarius ametesti
February 4 Aquarius ametesti
February 5 Aquarius ametesti
February 6 Aquarius ametesti
February 7 Aquarius ametesti
February 8 Aquarius ametesti
February 9 Aquarius ametesti
February 10 Aquarius ametesti
February 11 Aquarius ametesti
February 12 Aquarius ametesti
February 13 Aquarius ametesti
February 14 Aquarius ametesti
February 15 Aquarius ametesti
February 16 Aquarius ametesti
February 17 Aquarius ametesti
February 18 Aquarius ametesti
February 19 Pisces ametesti
February 20 Pisces ametesti
February 21 Pisces ametesti
February 22 Pisces ametesti
February 23 Pisces ametesti
February 24 Pisces ametesti
February 25 Pisces ametesti
February 26 Pisces ametesti
February 27 Pisces ametesti
February 28 Pisces ametesti
February 29 Pisces ametesti
Natural Natural Kukadzi dombo rekuzvarwa riri kutengeswa mune yedu gem shopu
Isu tinogadzira tsika yekugadzira mabwe ekuberekwa kwaFebruary semhete dzekubatanidzwa, mitsipa, mhete dzesimbi, zvishongo, zvishongo… ndapota taura nesu for quote.
Ametesti 1.96 CT
Ametesti 4.01 CT
Ametesti 4.64 CT
Ametesti 4.85 CT
Ametesti 5.64 CT
Ametesti 6.14 CT
Ametesti 6.78 CT
Ametesti 6.90 CT